सुन्दर बजारको कुरूप यथार्थ बयान गर्दै नाटकको सुरुवात हुन्छ– 'लाटीको छोरा ।
समाजको पिँधमा रहेकालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूपमा कसरी दबाइन्छ भन्ने विषयमाथि नाटक केन्द्रित छ ।
नाटकमा सम्पूर्ण कथा कान नसुन्ने र बोल्न नसक्ने महिला 'लाटी’ पात्रमार्फत दर्शकसामु प्रस्तुत गरिएको छ ।
लाटीको चरित्रमार्फत समाजमा रहेका पुरुषको दरिद्रतालाई निकै सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सिनामङ्गलस्थित पुरानो घर थिएटरमा 'लाटीको छोरा’ नाटकको मञ्चन भइरहेको छ ।
कथाकार श्याम शाहको कथा 'लाटीको छोरा’मा आधारित तथा रङ्गकर्मी सुलक्षण भारतीको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको नाटकको गरिबमाथि हुने अन्यायलाई दर्शाउन खोजिएको छ ।
कथाकार शाहको 'अब्बा’ नामक कथासङ्ग्रहमा सङ्गृहित कथामा आधारित रहेर नाटक बनेको छ ।
नाटकमा भुँइमान्छेको कथा देखाइएको छ । समाजका टाठाबाठा र व्यवस्थाको मारमा शोषितको कथालाई नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नाटकमा बोल्न र सुन्न नसक्ने एक महिलामाथि कसरी समाजका उच्च तहमा पुगेका मानिसले अत्याचार गर्छन् र त्यो अत्याचारको आरोप भने समाजको तल्लो तहमा रहेको मानिसमाथि लगाएको कथा नाटकमा देख्न सकिन्छ । स्टेजमा कान नसुन्ने र बोल्न नसक्ने महिला (लाटी)को प्रवेश हुन्छ ।
व्यापारीको छोराले लाटीलाई प्रेम गर्न थाल्छ तर धनी व्यापारीको छोरो भएकाले लाटीसँगको प्रेममा अवरोध आउँछ । रातमा गाउँका भलाद्मी पुरुष भेला हुन्छन् र लाटी अचानक गर्भवती हुन्छे ।
तब को मार्फत गर्भवती भइन् ? टोल भरि आश्चर्य प्रकट हुन्छ । लाटीको गर्भमा के व्यापारीको छोराको बच्चा हुर्किरहेको छ ? कि अरू कसैको ? प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । लाटी गर्भवती भएपश्चात् गाउँमा पञ्चायत बोलाइन्छ । तर, समाज मौन रहन्छ ।
शिक्षक, प्रहरी, पण्डित र व्यापारी एक–एक गर्दै लाटीको गर्भ आफ्नो भएको र यो समस्याको समाधान निकालिदिन मुखियालाई एकान्तमा अनुरोध गर्छन् । मुखिया पनि अपराधी मानसिकतामा फसेका हुन्छन् र डोमलाई फसाउनेगरी लाटीको गर्भ डोमको भएको निष्कर्ष सुनाउँछन् । डोमलाई जेल हालिन्छ ।
केही समय बित्छ । चुनाव जितेर गृहमन्त्री बनेको नेता गाउँ फर्कन्छ । गाउँमा नयाँ केटालाई देखेर मन्त्रीले सोध्छ– 'तिमी कसको छोरा ?’ केटो जवाफ दिन्छ, “म लाटीको छोरा ।” कथाको वास्तविकता फर्दाफास भएसँगै थिएटरका सबै बत्ती निभ्छन् र नाटक समाप्त हुन्छ । कथालाई नाटकको रूप दिन सुलक्षण भारतीले धेरै मिहिनेत गरेका छन् ।
सामान्य भए पनि मञ्च निर्माण कलात्मक छ । चौतारोमा ठडिएको बूढो रूख इतिहास र वर्तमानको साक्षी बनेको छ । नाटकमा आक्रोश र पीडाको समभाव बोध गराएर दर्शकलाई आक्रोशित बनाउन र आँसु खसाउन नाटक सफल छ । नाटक माघ ९ सम्म मञ्चन हुनेछ । सिनामंगलस्थित पुरानो नाटक घरमा चलिरहेको नाटक शनिबार दिउँसो १ बजे पनि र बाँकी दिन ४ः४५ मा मञ्चन हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
तपाईंलाई थाहा छ, कहिल्यै नसुत्ने मेहनती जीव माहुरीका यी १३ रोचक तथ्य ?